Wafdi ka socday Kenya ayaa Mogadishu kula kulmay madax ka tirsan Wasaarada Arrimaha… – Hagaag.com
Wafdi ka socday Kenya ayaa Mogadishu kula kulmay madax ka tirsan Wasaarada Arrimaha…
Xoghayaha Sare ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya Amb. Macharia Kamau iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, booqashada wafdigan oo aheyd hal maalin ayaa la kulmay Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Maxamed Cali Nuur Xaaji ayaa wafdigan ku qaabilay Xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Muqdisho.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labo geesoodka iyo siyaabaha loo horumarin karo iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii u dambeeyay xiriirkooda mugdi galay.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in wafdiga Kenya ay kala hadleen Mas’uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha dibadda, sidii dib loogu bilaabi lahaa Qaadka laga keeno Kenya oo dowladda joojisay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday Cudurka Corona, balse dowladdu dhowaan fasaxday qaadka laga keeno dalka Itoobiya.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa mugdi galay, tan iyo wixii ka dambeeyay horaantii sanadkii 2018, waxaana jiray hadalo kulul oo dowladda Soomaaliya warbaahinta u marisay Kenya oo ahaa inay faragelin ku heyso arrimaha gudaha Soomaaliya.